Webmail: nhọrọ ị nwere n'aka gị | Site na Linux
Webmail: nhọrọ ị nwere n'aka gị
N’ezie i nweela otu ma ọ bụ karịa Akaụntụ mail, ma ikekwe ị na-enweghị obi ụtọ na ọrụ ahụ ma ọ bụ na-achọ ọrụ nwere njirimara nwere njirimara. Ya mere, n'isiokwu a, ị ga-ahụ ezigbo onye ndu iji mara ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọrụ webmail.
Ọzọkwa, ị ga-amụta ụfọdụ ihe nzuzo na nkọwapụta teknụzụ nke ụwa nke ozi ka ị wee mara otu ọrụ ndị a si arụ ọrụ ma ọ bụ otu ị nwere ike isi hazie ndị ahịa gị ma ọ bụ sava email iji nwee ike izipu ma nata ozi ịntanetị gị nke ọma ...
1 Webmail na onye ahịa ozi
1.1 Otu esi edozi onye ahia
1.2 Jiri mutt
2 Fọdụ ọrụ webmail na-ewu ewu
3 Otu esi emepụta sava ozi nke gi na Linux
Webmail na onye ahịa ozi
I kwesịrị ịma na ị ga-emeli ya zipu ma ọ bụ nata ozi ịntanetị n'ụzọ dị iche iche. Ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ ọdịiche dị n’etiti ha abụọ na-agba ọchịchịrị site na inwe ike iji ma n’ọtụtụ ọrụ email ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, GMAIL, ọrụ Google a ma ama nwere ike iji n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ.
Ma, ka anyị lee ndị ahụ usoro n'ụzọ zuru ezu karị ...
Weebụ ozi: ọ bụ ozi email dabere na ntanetị weebụ. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ijikwa ozi gị site na ihe nchọgharị weebụ na ngwaọrụ ọ bụla nwere njikọ Internetntanetị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụ ọrụ igwe ojii, na-enweghị mkpa ịwụnye mmemme na mpaghara ma ọ bụ rụọ ụdị nhazi ọ bụla. N'okwu a, a ga-echekwa ozi ndị ahụ na sava dịpụrụ adịpụ nke ndị na-eweta ọrụ nwere. Ọ bụ ya mere kpomkwem echekwa ohere maka ozi na mgbakwunye maka onye ọrụ ọ bụla nwere mmachi na ndị na-eweta ya nwere ike ịdị iche site n'otu ọrụ gaa na nke ọzọ.
Ahịa ahịa: N'adịghị ka ndị dị n'elu, na nke a ị chọrọ mmemme arụnyere na mpaghara gị, ma na PC gị ma ọ bụ na ngwaọrụ mkpanaaka gị. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere mmemme dịka Mozilla Thunderbird ma ọ bụ Microsoft Outlook, ma ọ bụ ngwa gam akporo dịka nke GMAIL (ọ bụghị naanị na ọrụ nke Google, kamakwa ndị ọzọ), Blue Mail, Aqua Mail, wdg. Bụrụ na ọ nwere ike, na nke a ọ dịkwa mkpa ịhazi data nnweta na onye ahịa ka o wee nwee ike ịnweta igbe akwụkwọ ozi. N'ezie, ị nwere ike ịhazi ka e wee chekwaa ozi-e na mpaghara gị ma sava ahụ dịpụrụ adịpụ (naanị ị nwere ike ịnweta ozi ịntanetị ochie site na mmemme ndị ahịa) ma ọ bụ ka e wee chekwaa ha na sava ahụ. N'okwu nke mbụ ị nwere ihe egwu na ọ bụrụ na ịnwe ngwaọrụ gị, ọ mebiri emebi, ma ọ bụ ehichapụ ha maka ihe ọ bụla, ị gaghị enwe ike ịnweta ozi ndị ahụ.
Otu esi edozi onye ahia
Ọfọn, n'ihe banyere onye ahịa email ahụ, ị ​​ga-etinye usoro ihe omume ma ọ bụ ngwa ma rụọ ọrụ nhazi a choro. Nke a bụ ihe na - eweta ọtụtụ obi abụọ na ndị ọrụ pere mpe nwere oke. Ọ bụ ya mere m ga-enye ihe atụ nke nhazi ọrụ ozi IONOS (nke mbụ 1 & 1) enwere ike iji hazie ndị ahịa dị ka Thunderbird, GMAIL, wdg.
Lo Ihe mbu i kwesiri ime bu ima data nke oru ozi na inwere, ma obu GMAIL, Yahoo!, nke IONOS nwere (ma obu oru ozo) nke na-enye gi ozi email na aka oru ya, wdg. N'ihe atụ a, ka anyị were ya na ha bụ ndị a:
Aha njirimara: info@micorreo.es
Ihe nkesa na-abata: nhazi data maka ozi ịntanetị na-abata na onye ahịa.
Aha ihe nkesa: nke a dịgasị dabere na ọrụ ahụ, chọọ nke maka ikpe gị. Iji maa atụ, maka IONOS ọ ga - abụ:
Ọdụ ụgbọ mmiri: ha na-abụkarị otu maka ọtụtụ ọrụ, ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike gbanwee ha maka nchekwa ka ha wee bụrụ ndị a na-ahụkarị:
Nche- nwere ike ịbụ na ederede ederede, ma ọ bụ ezoro ezo maka nchebe agbakwunyere dị ka SSL / TTL, wdg. Ikwesiri igwa onwe gi banyere okwu gi. N'ihe banyere IONOS, ọ bụ STARTTLS.
Sava na-apụ apụ: nhazi data maka ozi email nke onye ahịa.
Aha ihe nkesa: stp.ionos.es
ndị ọzọ: ụfọdụ ndị ahịa nwere ike inye gị nhọrọ ndị ọzọ dị elu ịhọrọ, ma ọ bụ jụọ gị maka usoro nyocha ma ọ bụ usoro njirimara, ọ bụrụ na ịchọrọ itinye paswọọdụ oge ọ bụla ị ga-enweta, ọ bụrụ na ịchọrọ ka m cheta ya, wdg.
Ruo ugbu a ihe niile ịmara banyere ọrụ ozi mail gị. Ugbu a, m ga-etinye ihe atụ nke otu esi mee nhazi na onye ahia Thunderbird, mana enwere ike itinye ya na ngwa ndị ọzọ dịka GMAIL, wdg. Ọ bụ karịa ma ọ bụ obere otu, naanị usoro, aha ụfọdụ nhọrọ, ma ọ bụ ọnọdụ nke nhọrọ ntọala ga-adị iche ... Ọfọn, usoro a ga-abụ:
Mepee Thunderbird na kọmputa gị jikọọ na netwọk.
Na ibe mbu ị ga-ahụ Debe akaụntụ na obere mpaghara a na-akpọ Akaụntụ Akaụntụ. Pịa ebe ahụ.
Ugbu a, windo mepere ma jụọ gị aha gị, adreesị ozi-e na paswọọdụ gị. E nwekwara otu nhọrọ na ị nwere ike akara nke mere na ọ na-echeta paswọọdụ na-adịghị ajụ gị maka ya oge ọ bụla ị chọrọ ịnweta. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, n'ihe gbasara IONOS, ọ ga-abụ, dịka ọmụmaatụ: Pepito, info@micorreo.es na password_que_hayas_elegido n'otu n'otu. Ozugbo ị banyere, pịa bọtịnụ ka ị gaa n'ihu.
Ọzọ ihuenyo ọhụrụ na-egosi ebe ọ na-ajụ gị maka nkọwa ndị ọzọ banyere ọrụ gị. I gha hu na uzo abuo di, otu oku Na-abata na onye ozo Ọpụpụ. Ha na-ezo aka na data nkesa na-abata ma na-apụ apụ nke m gosiri n'elu. Naanị ị ga-ejupụta nkọwa kwesịrị ekwesị na nkọwa m gosipụtara na mbụ. Site n'ụzọ, enwere ngalaba maka paswọọdụ nke na-enye gị ohere ịhọrọ n'etiti Autodetect, Nkịtị (ederede doro anya), Encryption, wdg, na ụkpụrụ ịhapụ ya dị ka Nchekwa onwe (ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ họrọ izo ya ezo), belụsọ na ọrụ gị bụ ihe pụrụ iche na jiri ụfọdụ ndị ọzọ. Na nke na-apụ apụ, a họrọla nhọrọ SMTP na ndabara ma ị nweghị ike ịgbanwe ya, mana na onye na-abata ị nwere ike ịhọrọ n'etiti IMAP na POP3. Họrọ nke ị họọrọ ga-arụ ọrụ, mana… olee ọdịiche ọ na-eweta? Aga m akọwa:
IMAP: bụ protocol na-arụ ọrụ ozugbo na sava. Ya mere, iji lelee email ahụ, ọ ga-ejikọ ya ma gosipụta ọdịnaya ya. Ihe bara uru bụ na email ga-adị na ngwaọrụ niile ma ọ bụ ndị ahịa ị haziri na mgbanwe ọ bụla ga-ahụ onye ọ bụla ma ọ bụrụ na ngwaọrụ ndị ahịa nwere nsogbu, ozi ịntanetị agaghị efu. Ọ bụ ya mere ọ kachasị mma. Naanị ihe ị kwesịrị ịma bụ na ọ bụrụ na ị mepụta folda sitere na IMAP, agaghị enweta ha site na POP3.
POP3: ọ bụ protocol na-ejikọ na ihe nkesa ma budata ozi ịntanetị niile na mpaghara. Ozugbo emere ya, ọ na-ewepu ha na sava ahụ, ya mere, ha agaghị adị maka ngwaọrụ ndị ọzọ. Nwere ike ịnweta ha na mpaghara gị, ya bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịlele email ochie site na ndị ahịa ma ọ bụ ngwaọrụ ọzọ, ị gaghị enwe ike. Ọ bụrụ na ihe emee na ngwaọrụ ebe ebudatara ha, ị ga-atụfu ozi ịntanetị. Ọ bụ ya mere na ọ bụghị nhọrọ akwadoro. Nanị uru bụ na ọ ga-ahapụ ohere na sava ahụ (mana ọ na-ejide ya na ebe nchekwa gị) ma gbochie ya ijupụta yana ị nwere ike ịnweta ozi ịntanetị gị site na mpaghara na-enweghị mkpa njikọ ...
N'ikpeazụ pịa Emela na voila, ugbu a, ọ ga-egosi gị isi ihuenyo gị na igbe mbata, igbe mbata, ahịhịa, wdg. Ọ bụrụ na ihe niile agazuru nke ọma ị nwere ike ịmalite iji email gị n'aka onye ahịa gị.
O doro anya na ị maraworị mutt, bụ usoro usoro iwu nke na-enye gị ohere izipu ozi ịntanetị site na Linux console. Ọ bụrụ na ị wụnye ngwugwu ahụ site na nkwụsị nke distro gị, ojiji ya adịghị mgbagwoju anya.
Onye ahịa a chọkwara Mbido dika ndi ozo. Ma na nke a, ị ga-emerịrị ma ọ bụ dezie faịlụ ahụ ./muttrc:
Mgbe ahụ ị ghakwara ịmepụta ndekọ:
Na n'ihi zipu email na mgbakwunye, ị nwere ike iji iwu a dị mfe:
Ma ị nwere ike iji nke a na ederede ...
Fọdụ ọrụ webmail na-ewu ewu
Ozugbo ị matara otu esi amata ọdịiche dị n’etiti Webmail na onye ahịa email, ugbu a anyị ga-ahụ ụfọdụ ọrụ webmail mara (ọ bụ ezie na ị nwekwara ike hazie ha ka ha nweta site na email):
Gmail: bụ ọrụ Google n'efu, mara nke ọma ma jiri ya mee ihe. Ọ nwere uru ị na-enye gị ịnweta ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ a, dị ka GDrive, inwe ike ịmekọrịta data gam akporo gị, Kalinda, Akwụkwọ Google, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọbụna ọ nwere nhọrọ ịkwụ ụgwọ iji nweta ọrụ G Suite ọzọ, dị mma maka ndị chọrọ ihe ọzọ, ụlọ ọrụ, wdg. Ọ nwere ihe ruru 15 GB nke ohere nchekwa na-ekere òkè na ọrụ ndị ọzọ (gbasaa ya na nhọrọ ịkwụ ụgwọ), yana ikike maka mgbakwunye 25GB (ma ọ bụ 50MB maka ndị na-abata site na ọrụ ndị ọzọ). Nwere ike izipu ogo buru ibu site na iji njikọ GDrive ma ọ bụ site na ịkekọrịta ọdịnaya na akaụntụ ndị ọzọ. N'ezie, ọ na-akwado nhazi na onye ahịa ma ọ bụ jiri site na ntanetị weebụ (webmail).
Yahoo!: nke a bụ ihe ọzọ n'ime ọrụ kacha mara amara. Dị ka nke gara aga, ọ na-enye ohere nhazi site n'aka onye ahịa ma ọ bụ jiri dị ka ozi ntanetị. Ọ na-enye 1GB nke ohere efu, ma ọ bụ karịa ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ. Ma Mgbakwụnye, i nwere ike iru Mgbakwụnye bụkwa 25MB.
Osa: ọ bụ ihe na-atọ ụtọ na-arụ ọrụ ngwanrọ n'efu (n'okpuru ikike GNU GPL) edere na PHP. Ọ dị maka Linux, FreeBSD, macOS, na Windows. Onye oru Nathan na Luke Ehresmantam haziri ọrụ webmail a, bụ ndị gbasoro ụkpụrụ HTML 4.0 iji melite ndakọrịta na sava weebụ. Enwere ike ịhazi ya na onye ahịa, na-akwado plugins iji gbatịa ike ya ma gbakwunye ọrụ ọhụrụ na isi nke ngwa ahụ, ọ dịkwa n'ihe karịrị asụsụ 40.
Outlook.com: ọ bụ ọrụ Microsoft a ma ama, na-enwe ike iji ma na ọnọdụ ntanetị ma hazie onye ahịa. Ọrụ a jikọtara ya na ndị ọzọ sitere na ụlọ ọrụ, dị ka Office, kalenda, OneDrive, wdg. Ọ bụghị oghe oghe, ọ bụ ezie na ọ nwere ọnọdụ efu (yana ndenye aha ndị ọzọ akwụ ụgwọ). N'ime ọrụ n'efu ị nwere ohere 15GB maka akaụntụ gị yana maka njedebe nke mgbakwunye ị nwere 20MB ma ọ bụ 10MB maka Exchange.
MepeeBox: Ọ bụ ọrụ ọzọ dị ugbu a ka ọ dị ugbu a n'ihi enweghị ọrụ dị ka Osa, na mgbakwunye, enwere ụfọdụ nsogbu na 2020 nke nyelarịrị akara ngosi nke ihe ga-eme. Ọrụ webmail a yiri nke ndị ọzọ, na-eji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ ma na-enye ohere ịhazi yana onye ahịa ma ọ bụrụ na ịchọrọ. O kwere ka mgbakwunye dị ihe ruru 500MB kwa ozi, ma nwee oghere mebere naanị 1GB. A sụgharịrị ihu ya na ntanetị gaa n'asụsụ Spanish, French, English, Italian, Irish na Polish.
Zoho: ọrụ ọzọ a makwaara. Na ya free version, ọ na-akwado ruo 25 dị iche iche ọrụ, o nwere ụfọdụ ọrụ na-ejikarị na-akwụ ụgwọ na ọrụ ndị ọzọ, na o nwere na-akpali collaborative na ụlọ ọrụ ngwaọrụ. Have nwere njedebe na mgbakwunye nke 25MB maka ọrụ efu ma ọ bụ 30MB maka ọrụ akwụ ụgwọ, yana 5GB maka akaụntụ efu.
ProtonMail: ọ bụ otu n'ime ọrụ ntanetị kachasị mma (nke nwere ike ịhazi ya na onye ahịa), nke ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ahọrọ karịa nchekwa na nzuzo. N'ezie, ọ nwere ụfọdụ atụmatụ nzuzo mara mma, yana ezoro ezo ozi ezoro ezo. Banyere oghere dị na ọnọdụ ya n'efu, ọ na-erute 500MB yana njedebe ụbọchị ọ bụla nke ozi-e 150. Banyere njedebe nke mgbakwunye, ọ na-enye ohere nke 25MB kachasị yana yana ihe mgbakwunye 100 kwa email.
Weebụ Webmail- Nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ maka ndị ọrụ ejirila ụmụ mgbei mgbe SquirrelMail na OpenMailBox nwụsịrị. Edere onye njikwa ozi a maka webmail (ọ ga-ekwe omume iji onye ahịa ya) na PHP, ndị mmepe ya mepụtara nnukwu usoro yana ọtụtụ ngwaọrụ na mkpịsị aka gị, site na ozi ahụ n'onwe ya, site na kọntaktị kọntaktị, ederede, site na iwu nzacha, wdg. Ha niile n'okpuru ikikere LGPL. Ọ dị na Spanish ma nwee ike ịhazi ya.
Otu esi emepụta sava ozi nke gi na Linux
E nwere ọtụtụ ndị na-ezipụ akwụkwọ ozi ma ọ bụ MTAdị ka Postfix, SendMail, wdg. Na ha ị nwere ike hazie nkesa ozi gị ka ị ghara ịdabere na ọrụ ndị gara aga. Dịka ọmụmaatụ, iji hazie ya na Ubuntu site na iji SendMail, ị nwere ike ịgbaso usoro ndị a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Webmail: nhọrọ ị nwere n'aka gị
E wepụtalarị Ọchịchị nke etiti abalị 4.8.25 na ndị a bụ akụkọ ya
Pi-KVM: Ihe Mgbanwe KVM na Raspberry Pi